“Qof walba ee ku sugan Manchester City diyaar ayuu u yahay kulanka beri” – Guardiola – Gool FM
“Qof walba ee ku sugan Manchester City diyaar ayuu u yahay kulanka beri” – Guardiola
Dajiye December 29, 2018
(Manchester) 29 Dis 2018. Pep Guardiola ayaa daaha ka qaaday in dhamaan ciyaartoyda kooxda Manchester City ay si xoogan diyaar u noqdeen, kahor kulanka bari ay Skay Blues ku wajihi doonto kooxda Southampton horyaalka Premier League.
Kooxda Manchester City ayaa haatan farqiga dhibcaha ka hooseysa hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Liverpool 7 dhibcood, kadib markii ay guuldarooyin xiriir ah lasoo kulantay labadii kulan lasoo dhaafay.
Hadaba macalinka reer Spain oo la hadlayay saxaafada kahor kulanka bari ee Southampto ayaa wuxuu yiri:
“Qof walba ee ku sugan Manchester City diyaar ayuu u yahay kulanka beri, waxaan la kulanay dhibaatooyin, laakiin waxaan go’aan ka gaari doonaa ciyaarta ka hor”.
“Gabriel Jesus, Vincent Kompany, Fernandinho, waxay haatan nala sameenayaan tababarka”.
“Waa inaan aaminaa awoodeena, kadib guuldarada waa inaan bixinaa jawaab cad, waa hadii aan dooneyno inaan ku guuleysano koobab”.
“Ma sameyn doono saxiixyo bisha Janaayo, waxaan u maleenayaa inaad fahmteen erayada aan idin kula hadlay”.
Liverpool oo Si Xun ugu Bahdishay Arsenal garoonkooda Anfield...+SAWIRRO